CAJIIB ! Maxay Aheyd Khudbadii Ugu Horeysay Ee Uu Jose Mourinho Abid Ka Jeediyay Qolka Labiska Chelsea ? Faahfaahin Ayaa Laga Helay - iftineducation.com
iftineducation.com – Cidna kama qarsana hadalada kulul ee uu Jose Mourinho u adeegsado saxaafada, kibirka ama sida ay dadka qaar u arkaan ee kalsoonida uu ula hadlo saxaafada, laakin xaqiiqdii miyuu u faanaa ciyaartooydiisa mise ula hadlaa si kibir ku jiro ? khubadii ugu horeysay ee uu abid ka jeediyo qolka labiska Chelsea ayuu sharaxay daaficii hore ee kooxdaasi ee William Gallas.
Jose Mourinho ayaa ciyaartooydii Chelsea u balan qaaday inuu ka dhigi doono “Horyaalka dalka” hadii ay aqbalaan oo aay qaataan talooyinkiisa, sida uu sharaxay daaficii France.
Macalinka Portuguese ka ah ayaa markii ugu horeysay yimid Stamford Bridge sanadii 2004 kadib markii uu Champions League kula soo guuleystay Porto wuxuuna si layaab leh shirkiisii jaraa’id ee ugu horeeyay uu ku sheegtay inuu yahay ‘the Special One’ ama mid khaas ah.
SI kasto, wuu ka dhabeeyay labadiisii hadalba isagoo balan qaadkii ciyaartooydiisa uu uga dhabeeyay labo horyaal oo Premier League uu u qaaday Chelsea labadiisii sano ee ugu horeysay ee kooxdaas, waana horyaalkoodii ugu horeeyay ee mudo 51 sano ah, tan hadalkii Special one ayuu iyana ku muujiyay inuu soo afjaray dagaalkii labo aflaha ahaa ee Man United iyo Arsenal waxaana labadasii horyaal ee ugu horeysay qeyb ka qaatay Gallas ka hor inta uusan u dhaqaaqin Arsenal.
“Cidna ma aysan aqoon markii aan la kulmeynay,” Gallas ayaa sidaasi u sheegay Sky Sports. “Waan ogeyn inuu Champions League kula soo guuleystay Porto, kulankeenii ugu horeeyay waxaan kula qaadanay Stamford Bridge ka hor tababarka”.
“Wuxuu nagu yiri ‘Kaliya sadex qof oo idin ka mid ah ayaa soo qaaday horyaalo, [Claude] Makelele waa horyaal, [Ricardo] Carvalho waa horyaal, [Paulo] Ferreira isna waa horyaal kale, ma jiro qof kale oo idin kamid ah oo sharaftaas gaaray”.
“Hadii aad dooneysaan inaad ku guuleysataan koob, waa inaad isoo raacdaan, hadii aad isoo raacdaan, koobab ayaan idiin keeni doonaa ” ayuu kalsooni ku jirto ugu yiri Jose ciyaartooydiisii Chelsea.